ကာဆမ်ဆူလေမာနီ - အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လုပ်ကြံခံရတာ အိုင်အက်စ်တွေ ဘာအကျိုးရှိသလဲ
ကာဆမ်ဆူလေမာနီ - အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လုပ်ကြံခံရတာ အ...
11 ม.ค. 2563 - 00:38 น.
အီရတ် ဘဂ္ဂဒက်လေဆိပ်မှာ အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာဆမ်ဆူလေမာနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာကို အိုင်အက်စ် အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံအဖွဲ့က ကြိုဆိုတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အီရန် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ရဲ့ ကွဒ်စ် အထူးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆူလေမာနီဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း စစ်ဆင်ရေးတွေကို ကွပ်ကဲသူတွေဖြစ်ပြီး အိုင်အက်စ်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဒေသတွင်းက တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်း ကြိုးကိုင်အကြံပေးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်အက်စ်တွေ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေသေးလဲ
အီရန်ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အမေရိကန် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး
ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးသေဆုံးသွားမှုဟာ ဂျီဟတ် ဘာသာရေး စစ်ပွဲဆင်နွှဲသူတွေအတွက် ဘုရားသခင်က ကူညီစောင်မတာလို့ အိုင်အက်စ်တို့က ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကြေညာချက်ထဲမှာ အမေရိကန်ကိုတော့ ထည့်သွင်းပြောတာမျိုး မရှိပါဘူး။
အိုင်အက်စ်တွေကို တိုက်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်း အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အတူ သေဆုံးခဲ့
အီရန် ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နောက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက တစ်ခုက ဂျီဟတ်တွေနဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ စစ်ပွဲဆီကို သက်ရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တွေက ချက်ချင်းဆိုသလို အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်တာတွေ ရပ်နားထားပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေက သူတို့ရဲ့ အဓိကအလုပ်က ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
စစ်ရေးအမြင်အရဆိုရင် သူတို့အတွက် အဲဒီလိုလုပ်ရုံမှတစ်ပါး တခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။
အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သတ်ဖြတ်ခံရပြီး အီရန်ရဲ့ လက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီလို တိုက်ခိုက်မှုတွေက အိုင်အက်စ် အဖွဲ့အတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ မျှော်မှန်းတဲ့ ကာလီဖိတ် နိုင်ငံတော် ရည်မှန်းချက် ပျက်သုဉ်းသွားတာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြင်ရှင်သန်လာအောင် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ဟာ နှစ်တွေအတော်များများ ကြံ့ကြံ့ခံနေခဲ့ပြီး အစောပိုင်းက ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့ အီရတ် အယ်လ်ခိုင်ဒါ အဖွဲ့ကနေ ပြန်ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားမှာ နယ်မြေတွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အိုင်အက်စ်ကို ချေမှုန်းဖို့အတွက် ၂၀၁၆ နဲ့ ၂၀၁၇ မှာ စစ်ဆင်ရေးကြီးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဂျီဟတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ အတော်များများ သေဆုံး၊ ထောင်ကျခဲ့ကြပေမဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ ပျက်မသွားခဲ့ပါဘူး။
အခုထက်ထိ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားက နယ်မြေတချို့မှာ ဆက်ရှင်သန်နေပြီး ချုံခိုတိုက်ခိုက်တာ၊ အဓ္ဓမ ငွေကြေးရန်ပုံငွေတောင်းတာနဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ဆက်လုပ်နေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကာဆမ်ဆူလေမာနီ - အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လုပ်ကြံခံရတာ အိုင်အက်စ်တွေ ဘာအကျိုးရှိသလဲ